Margarita Salas: ihe omuma, ihe omuma na onyinye nye sayensi | Network Meteorology
N’ụwa sayensị na nyocha, e nweela ụmụnwaanyị ndị mere ọganiihu ma mekwa nke ọma. Otu n’ime ha bụ Margaret Salas. Ya na di ya, ha malitere mmepe nke ihe omimi ihe omimi na Spain. Ihe omumu ya lebara anya na oria nje Phi29 wee nye anyi ohere imata otu DNA si aru oru. Ekele maka ntuziaka ya anyị maara na ha agbanweela protein na etu protein si metụta ibe ha iji mepụta nje na-arụ ọrụ.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị akụkọ ndụ na onyinye sayensị nke Margarita Salas.
1 Biography nke Margarita Salas
2 Ọmụmụ ihe na nyocha
3 Onyinye Margarita Salas na sayensị
Biography nke Margarita Salas
N'otu aka ahụ, nwanyị a na-akọwa onwe ya dị ka onye dị mfe ma na-arụsi ọrụ ike. Ọ bụ onye na-ahụ ihe osise na ihe ọkpụkpụ nke oge a n'anya. N'etiti omume ọma ya ọ nwere mkpa ịkwụwa aka ọtọ na ebe kachasị amasị ya bụ ụlọ nyocha na-esote ime obodo Asturian. Ọ na-ekwukarị na laabu bụ ebe ị ga-echezọ ụwa ndị ọzọ. Amuru ya na 1938 n’obodo di n’akuku Asturia nke ana akpo Canero. Banyere ọzụzụ gị, ndị mụrụ ha doro anya na ụmụ ha ga-eme akara mahadum.
O nweghị ụdị ịkpa ókè ọ bụla metụtara nwanne ya nwoke, ebe ha bụ ụmụnne atọ. Margarita Salas banyere mahadum mgbe ọ dị afọ atọ wee gaa n'ihu ruo mgbe ọ gụsịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị. N'ime etiti ha nwere ọzụzụ zuru oke na ma mmadụ na sayensị. Ọ bụ ezie na ọ masịrị ha abụọ, ọ malitere ịba miri emi n'ọzụzụ sayensị. Ọ họọrọ ịga Madrid ka ọ mụọ usoro nhọrọ nke gụnyere physics, kemistri, mgbakọ na mwepụ, bayoloji na geology. A ghaghi inyefe ihe ndia nile iji nweta nzere na onwu.
Margarita enweghị mmasị na geology, ọ chọghịkwa ka alaka a nwee ike ịgwọ ọrịa. Ihe niile ọ gụrụ nyere ya ohere ịme ọmụmụ abụọ ahụ ma mesịa kpebie kemịkal. Ọ bụ ezigbo nhọrọ, ebe ọ ghọtara na obi dị ya ụtọ iji ọtụtụ awa na-arụ ọrụ na kemịkal kemịkal. Otu nkebi ahịrịokwu ya kacha mara amara bụ nke «Arụghị ọrụ sayensị, e mere ya».
Margarita Salas zutere Severo Ochoa ma gwa ya ka o soro ya gaa ogbako na nyocha. Na okwu a nke ndị ọkachamara, ihe ọzọ maka biochemistry. N'afọ nke anọ nke ogo ọ zutere onye ga-abụ ịhụnanya maka ndụ ya a na-akpọ Eladio Viñuela. Ọ bụ nwoke nwere ọgụgụ isi, mara mma ma na-atọ ụtọ nwere ọtụtụ ọdịmma. N'oge ahụ, ogo ahụ na-akọwapụta nke ọma na di ya bụ Eladio nwere mkpụrụ ndụ ihe nketa. Ha abụọ nwere mmasị n'ebe ibe ha nọ ozugbo na njedebe nke ọmụmụ ha, ha ghọrọ enyi nwoke.
Ọmụmụ ihe na nyocha
Eladio bidoro ịchụso doctorate na mkpụrụ ndụ ihe nketa na otu ebe nyocha ihe ọmụmụ banyere ya. Ma, ọ chọpụtara na ụdị mkpụrụ ndụ ihe nketa nke ọ na-amụ bụ ihe kacha masị ya. O nwere mmasị na mkpụrụ ndụ ihe nketa nke a na-emegharịkwuo na biochemistry, isi ihe omumu a bu ihe omuma. N'ihi nke a, ọ gwara ya ka ya mee mkpakọ ọnụ. Ha lụrụ na 1963 na ha nwere ike ime usoro ihe omumu site na iri nke mejuputara 12000 nke pesetas ochie.
Na ngwụcha ọrụ niile ha na-emepe na ụlọ nyocha Sols, ha kpebiri ịgbaso ndụmọdụ Severo Ochoa nyere ha. Ha kwagara na laabu o nwere na New York ma nwee ike ime ka ihe ha choro mezuo site na akwukwo ego na nkwado ego enyere ha. N’ụlọ nyocha a, ọ dịtụghị mgbe ọ dị iche na a ga-akpagbu ya maka ịbụ nwanyị. Oku nile nwere ude kwesiri ha. Mgbe ọtụtụ afọ gachara na laabu a, ha kpebiri ịlaghachi Spen iji nwee ike ịzụlite usoro ọmụmụ ihe ọmụmụ. Ha maara na enwere ike ịchọta ha na mpaghara ebe mmasị sayensị dị obere na mgbe ahụ ọ gaghị ekwe omume nyocha. Na ọnọdụ a, ha ga-alaghachi United States.
Ajụjụ nke mbụ dị mkpa e welitere bụ ịhọrọ isiokwu nke ọrụ na ihe ha chọrọ inyocha na ịga n'ihu. Ọ bụghị naanị na ha bu n'obi ịga n'ihu na nyocha ha mere na ụlọ nyocha nke Ochoa, ebe ọ bụ na na Spen, ha enweghị ike ịlụ ọgụ na etiti a. N'ihi ya, ha choro uzo Phi29, nke bu ihe di nkpa. Nke a bụ ihe karịrị nje na-emetụta nje. Ọmụmụ ihe a yiri nnọọ ihe na-atọ ya ụtọ, ebe ọ bụ nje bụ nke kpatara onyinye mbụ na mkpụrụ ndụ ihe nketa na XNUMX.
Ebumnuche ha abụọ bụ ịkọwapụta usoro niile nke nje nke ejiri rụọ ọrụ maka morphogenesis ha. Nke ahụ bụ, otú nje nje guzobere si mmiri. Anyị maara na ihe ndị mejupụtara ya bụ protein na mkpụrụ ndụ ihe nketa. Ewezuga imezu ebumnobi ha, ha choro isi obodo ozo. Nyere na Spain enweghị ego maka nyocha, Severo Ochoa o nyere ha ego ka ha bụrụ naanị ndị nyocha na ụlọ nyocha nke ha kwenyere nke nta nke nta.
Onyinye Margarita Salas na sayensị
Na Spain, Margarita Salas nwere mmetụta ịkpa oke maka ịbụ nwanyị. Na ụlọ nyocha ọ nweghị nsogbu na ụmụ akwụkwọ doctoral, mana site na mpụga ụlọ nyocha ọ bụ naanị nwunye Eladio Viñuela. Nke a jọgburu onwe ya, n'ihi na ya onwe ya nwekwara uru. Iji kwụsị ịkpa ókè a, nyocha malitere na XNUMXs na nje virus swine Africa. Nchọpụta Phi29 bụ naanị n'okpuru nduzi nke Margarita. Nke a bụ otu o siri gosi na ọ nwere ike rụọ nyocha ahụ n'onwe ya na-enweghị mkpa Eladio wee bụrụ onye ọkà mmụta sayensị nwere aha ya ma ọ bụghị naanị "nwunye nke."
Amaara na ọ bụ nje na ọ naghị akpọ mmadụ mana ọ na-ebute nje Bacillus aghụghọ. Ihe mbụ enwere ike ịchọpụta site na Margarita Salas bụ na DNA nwere protein dị mkpa jikọtara ya na nsọtụ ya ka ọ nwee ike ịmalite imepụta ya. Ọ bụ oge mbụ enwere ụdịrị protein dị na DNA nke ihe dị ndụ. Ihe a niile bụ nchọpụta na usoro ọhụụ maka ịmị mkpụrụ ndụ ihe nketa. N'ihi nchọpụta ndị a, ọ ga-ekwe omume iji ụdị iji nyochaa nje ndị ọzọ nwekwara ụdị protein a. Vidio ndị a niile na-abụkarị njikwa ka njọ, ya mere ọganihu a abụrụla ezigbo mkpa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Margarita Salas na akụkọ ndụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Margaret Salas